Mpanakorontana fifidianana Migadra 2 hatramin’ny 5 taona
Mateti-piavy niditra tamin’ny antso an-taroby tamin’ireo haino aman-jery isan-karazany iny omaly iny ny avy eo anivon’ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana na ny CENI.
Maro ireo tranga nampiahiahy nitranga nandritr’iny fotoam-pifidianana iny ary dia niezaka nanome toromarika hatrany moa ny filoha lefitr’ity vaomiera ity, Thierry Rakotonarivo. Isan’ny fitarainana nandeha tamin’ireo fitaovan-tserasera sy tambazotra sosialy, ohatra, ny resaka fisiana biraom-pifidianana nitrangana fandrovitana mpifidy tsy natohitra fientanam-po ka nihoa-pefy nandrovitra ny lisitry ny mpifidy ka niteraka korontana tamina birao iray teto Antananarivo. Manoloana izany moa dia nampatsiahy ity filoha ity fa mahavoasazy ary mety hampigadra 2 hatramin’ny 5 taona ny fihetsika toy izany. Isan’ny nampatsiahiviny ihany koa fa tsy azo atao ny mbola manao tombana na “sondage” mandritra ny fotoam-pifidianana. Mbola re moa fa nisy nanao izany omaly. Isan’ny nampiahiahy ihany koa ny fisiana vata-fandatsaham-bato nadiva ho feno vao maraina ary nanome toromarika moa ny tenany fa rehefa feno ny vata iray dia soloina avy hatrany fa akisaka kosa ny efa feno. Nampiahiahy ny mpanara-baovao, ohatra, ny fahenoana fa efa nahatratra 85% sahady ny tahan’ny mpifidy tao Toliara kanefa tsy dila akory ny mitatao vovonana. Toy izany koa ny fokontany 1 tao Ampefy izay efa heno fa 98% sahady ny taham_pahavitrihana. Afaka 11 andro moa raha ny efa voambara no vinaniana hivoaka ny voka-pifidianana mbola tsy ofisialy.